China High Speed ​​Double Roller Crusher vagadziri uye vanotengesa | Bricmaker
Iyo roller ndeye alloy neukukutu pamusoro peHRC50 yakakwira nickel, molybdenum, mhangura uye vanadium zvinhu, zvakanyanya kuzviremedza uremu, uye diki yekudyisa kona. Inogona kusvina uye kukanya iyo mbishi zvinhu, kunatsiridza mbishi zvinhu zvine yakakwira kuburitsa, kunatsiridzwa kwepurasitiki, kudzikisira mwero wetsvina, uye kuona mhando yezvidhinha.
Iyo inokodzera iyo mbishi zvigadzirwa izvo pazasi yepakati-kuomarara (Platins kuomarara 4-5), senge mugomo madhaka uye kuvaka ivhu kutetepa uye kukanya.
Rinoshanda Mbishi zvinhu vachipedzisa kupwanya
Kushanda Musimboti 2-Roller Kupwanya
Kaviri Roller Gap
a) Asati atanga iyo michina, anoshanda anofanira kutarisa zvakasunga zvakasunga zvakaringana, izvo zvisingakwanise kuve nezvikamu zvakasununguka kana zvisipo. Zvikamu zvinotenderera ngazviongorore chokwadi hapana chinovharika chiitiko.
b) Muchina unogona kuisa musina-mutoro mashandiro mushure mekuongorora izvo zvikamu zvese zvinoshanda zvakajairika. Inofanira kunge iri kazhinji maawa maviri mushure mekushanda kwemutoro. Yese nguva yekutangazve haifanire-mutoro kutanga kutanga, mushure mekusvika yakatarwa kumhanya uye wozoisa mukutakura mashandiro
c) Nekuda kwekusaenzana homogeneity kwechinhu, iko kudengenyeka kwemuchina wese unoshanda kunogona kuunza fasteners yakasununguka chiitiko, saka ive shuwa yekutarisa kazhinji.
d) Kunyangwe roller seti yekuoma iri pamusoro, isu zvakare tinofanirwa kudzivirira pamusoro pematombo akaomarara, iyo simbi yemukati inosanganiswa mukuvhura kwekudya, semhedzisiro iyo kukuvara kune yakasetwa seti.
e) Kana yakatwasuka yakatenderera inodzvinyirira inopfuura 132884.8N, mabheji ekudzivirira kumasangano einishuwarenzi kumativi ese ari maviri anodimburwa kuchengetedza michina. Chero bedzi sekutsiva rakachengeteka bhokisi rinogona kuenderera mukushanda. Kana kumanikidzwa kweimwe divi chinotenderera kukapfuura 66442.4N, pini yekuchengetedza ichagurwawo.
f) Complex calcium lubricating grease (ZFG-1) yakaiswa mukati mekutenderera mukati memidziyo payakaunganidzwa kwekupedzisira, uye girizi inoda kuchinjwa kana kuwedzera mushure mekumhanyisa mazuva gumi nemashanu.
g) Mativi maviri echinogadziriswa chinotenderera chinotakura chinofanira kuramba chakachena nguva dzese, uye wedzera makumi maviri nemashanu # mafuta emuchina nguva dzese (1time / shift), kuitira kuti gwaro rinogadziriswa rifambe pamwe nemakiyi enzira nekupwanya simba uye simba rechitubu rinoshanduka, uyezve wedzera kupwanya kugona.
h) Kutenderedza ringi kupfeka kugadzirisa: bvarura inodzivirira maski pamativi ese emuviri, isa chigayo chekugaya chakaiswa muchassis ne shaft sleeve, yekumisikidza sikuru, chinotenderera chinotenderera (<10 r / min yakakodzera, inogona kushandisa yakakwira yekumhanyisa yekudzora).
i) Kufambisa mawoko emawoko, gadzirisa inoenderana nzvimbo, kutendeuka kugadzirisa iyo roller set.
Pashure: Inogadziriswa Hammer Crusher
Zvadaro: Yemweya Dombo Kubvisa Roller